Terms & Conditions - San Kyi Par
[ September 16, 2021 ] သင့်ချစ်သူ သင့်ကို ပိုပိုချစ်လာစေဖို့ ဒီနည်းလေးတွေကို အသုံးပြုပါ	Knowledge
[ September 15, 2021 ] (၁၀) ရက်အတွင်းမှာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ	Knowledge
[ September 14, 2021 ] ဖမ်းဆီးပြီး ရိုက်နှက်သူတွေ ဆွံ့အခဲ့ရတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးအရှိန်အဝါ	Knowledge
[ September 14, 2021 ] ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက် ဆံပင်အရမ်းကျွတ်နေသူတွေအတွက် အမြန်ဆုံးဆံပင်ပြန်ပေါက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း	Knowledge
[ September 13, 2021 ] ဆန်တွေဝယ်ထားတာကြာလာတဲ့နောက် ပိုးထိုးကာ မည်းညစ်လာပြီဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေကို စမ်းကြည့်ပါ	Knowledge
Please read these Terms and Conditions (“Terms”, “Terms and Conditions”) carefully before using the sankyipar.com website (the “Service”) operated by Sankyipar (“us”, “we”, or “our”).
Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Sankyipar.
Sankyipar has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Sankyipar shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.
By email: contact@sankyipar.com
သင့်ချစ်သူ သင့်ကို ပိုပိုချစ်လာစေဖို့ ဒီနည်းလေးတွေကို အသုံးပြုပါ September 16, 2021
(၁၀) ရက်အတွင်းမှာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ September 15, 2021
ဖမ်းဆီးပြီး ရိုက်နှက်သူတွေ ဆွံ့အခဲ့ရတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးအရှိန်အဝါ September 14, 2021
ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက် ဆံပင်အရမ်းကျွတ်နေသူတွေအတွက် အမြန်ဆုံးဆံပင်ပြန်ပေါက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း September 14, 2021
ဆန်တွေဝယ်ထားတာကြာလာတဲ့နောက် ပိုးထိုးကာ မည်းညစ်လာပြီဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေကို စမ်းကြည့်ပါ September 13, 2021
September 16, 2021 Comments Off on သင့်ချစ်သူ သင့်ကို ပိုပိုချစ်လာစေဖို့ ဒီနည်းလေးတွေကို အသုံးပြုပါ
(၁၀) ရက်အတွင်းမှာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
September 15, 2021 Comments Off on (၁၀) ရက်အတွင်းမှာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
ဖမ်းဆီးပြီး ရိုက်နှက်သူတွေ ဆွံ့အခဲ့ရတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးအရှိန်အဝါ
September 14, 2021 Comments Off on ဖမ်းဆီးပြီး ရိုက်နှက်သူတွေ ဆွံ့အခဲ့ရတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးအရှိန်အဝါ
ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက် ဆံပင်အရမ်းကျွတ်နေသူတွေအတွက် အမြန်ဆုံးဆံပင်ပြန်ပေါက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း
September 14, 2021 Comments Off on ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက် ဆံပင်အရမ်းကျွတ်နေသူတွေအတွက် အမြန်ဆုံးဆံပင်ပြန်ပေါက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း
ဆန်တွေဝယ်ထားတာကြာလာတဲ့နောက် ပိုးထိုးကာ မည်းညစ်လာပြီဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေကို စမ်းကြည့်ပါ
September 13, 2021 Comments Off on ဆန်တွေဝယ်ထားတာကြာလာတဲ့နောက် ပိုးထိုးကာ မည်းညစ်လာပြီဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေကို စမ်းကြည့်ပါ